Ejipta, Fahafatesan’Ilay Mpanozon-Doha : Mifampiampanga Ny Fitondrana Sy Ny Firahalahian’ny Silamo Taorian’ny Fipoahan’ilay Fiara Voasesika Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2015 13:35 GMT
Sary niely be tao amin'ny Twitter, ahitana ilay fipoahana nahafaty ilay Mpanozon-dohan'i Ejipta. Nozarain'i @TheMiinz
Nifanilika ny fitondrana Ejiptiana sy ny Firahalahian'ny Silamo taorian'ny famonoana ilay Mpanozon-doha, Hisham Barakat, izay maty noho ny ratra nahazo azy tamin'ny fipoahan'ny fiara voasesika baomba nikendrena ny fiarany sy ny an'ireo mpanaraka azy omaly (29 Jona 2015). Nambaran'ny fahitalavi-panjakana Ejiptiana fa androany (30 Jona) no atao ny fandevenana ara-miaramila.
Nentina tany amin'ny tobim-pitsaboana El-Nozah i Barakat taorian'ilay fahafihana izay nahavaky rà anaty azy. Nanodidina ny mitatao vovonana teo ho eo, nivoaka ny tatitra momba ny toe-pahasalamany marefo dia marefo, talohan'ny nilazan'ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny fahasalamana ny fahafatesany.
VAOVAO FARANY – maty noho ny ratra nahazo azy tamin'ny fanafihana ny fiarany sy ny mpanaraka azy ny mpanozon-doha faratampony eto #Egypt, hoy ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny fahasalamana #bomb #Egypt
Tsy mbola mazava ny antsipirihany momba ilay fanafihana. Ny vaovao nilaza fa nisy fiara voasesika baomba nanitsy ny fiaran'i Barakat sy ireo mpanaraka azy, ny Reuters kosa nanambara fa nisy mpiambina niteny fa nisy fiara nijanona napoaka avy lavitra.
Tamin'ny fotoana nialan'i Barakat ny tranony tao Heliopolis aoamin'ny distrikan'i Le Caire no nisehoan'ny loza. Nanaitra ny mponina ilay fipoahana mafy izay nampihovitrovitra ny làlana rehetra sy nandoro fiara efa ho 30 ; vaky hatrany amin'ny rihana fahafolo ny fitaratry ny varavarankelin'ilay trano avo teo akaiky teo, arakany hita asehon'ny lahatsary taorian'ilay fanafihana. Notaterin'ny haino aman-jerim-panjakana fa olona sivy no naratra tamin'ilay fipoahana, isan'izany ny mpamily roa sy mpiambina dimy an'i Barakat.
Ny bitsik'i Erin Cunningham, solontenan'ny Washington Post mipetraka Le Caire :
Lehibe ilay fiara voasesika baomba, betsaka ny zavatra simba. Vaky ny varavarankely tamin'ire trano avo be teo akaiky teo, rihana 8 hatramin'ny faha-10. Potika tanteraka ireo fiara teo akaiky teo
Vondrona kely tsy dia malaza antsoina hoe “Giza Popular Resistance” no nilaza tao amin'ny Facebook fa tompon'antoka tamin'ilay fanafihana. Efa nanapoaka baomba maro ity vondrona ity tamin'ny fiandohan'ity taona ity, talohan'ny fihaonana an-tampony iraisam-pirenena momba ny toekarena izay natao tany Ejipta.
Nibitsika i Joel Gulhane, mpanao gazety taloha tao amin'ny Daily News Egypt hoe :
Ho an'ireo izay miezaka hitadidy ny Giza Popular Resistance, ry zareo no nidaroka baomba ny rantsan'ny KFC tamin'ny fiandohan'ity taona ity
Fa ora vitsy taorian'ny nilazany ny andraikiny tamin'ilay fanafihana,tsy hita intsony ilay fanambaràna tao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo, araka ny nolazain'i Evan Hill, mpanao gazety manokana mpandalina ny Raharaha Afovoany Atsinanana :
Toa tahàka ny tsy hita intsony ilay fanambarana andraikitra nataon'ny vondrona Popular Resistance tao amin'ny Facebook
Nozarain'ny sampana mpampahalala vaovaom-panjakana tao amin'ny tranonkalany ny vaovao momba ilay fanafihana, manameloka tsotra izao ny Firahalahian'ny Silamo izy amin'izany. Etsy ankilany, nampangain'ny Firahalahian'ny Silamo ho nanao fampisehoana herisetra an-tsehatra ny fitondrana ankehitriny, ary nampiany hoe tsy hijanona ny herisetra raha tsy “afaka” i Ejypta :
Hamafisinay fa tsy hifarana ny herisetra raha tsy tanteraka ny fahamarinana, miongana ity fitondrana tsy ara-dalàna ity ary avela ho afaka i #Egypt
Notsindrian'ny Al-Ahram, gazetim-panjakana, fa tsy mbola fantatra ilay nahavanon-doza ary tsy misy mitonona ho tompon'andraikitra tamin'ilay fanapoahana baomba.
Tamin'ny Jolay 2013, notendrena ho Mpanozon-doha i Hisham Barakat taorian'ny nanonganana ilay filoha avy amin'ny Firahalahian'ny Silamo, Mohamed Morsi. Nitrangan-javatra maro nifamahofaho ny fotoana niasan'i Barakat, nanambara ho vondrona mpampihorohoro ny Firahalahian'ny Silamo, ary nenjehina ny maro tamin'ireo mpitarika ity vondrona ity sy ireo mpikambana tao, isan'izany ny Filoha teo aloha Morsi izy tenany. Mpikambana an-jatony ao amin'ny Firahalahian'ny Silamo no nalefan'i Barakat ho tsaraina, izay niafara tamin'ny fanamelohana ho faty ho an'ny maro tamin'izy ireny.
Tompon'andraikitry ny birao teknika tao amin'ny fitsarana ambaratonga faharoan'i Ismailia i Barakat talohan'ny naha-mpanozon-doha azy. Tompon'andraikitry ny fanadihadiana momba ilay filazana fa nandositra ny fonja nandritra ny revolisiona 2011 i Morsi io fitsaràna io. Noho ny vokatr'io fikarohana io dia voaheloka ho faty i Morsi tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Tompon'andraikitry ny fandefasana an'i Yassine Salah Eddin, mpanampy ny mpiandry fonja ho tsaraina noho ny namonoany mpikatroka mafana fo iray nandritra ny diabe am-pilaminana ilay maty (Barakat). Sazy 15 taona an-tranomaizina tay aminà fonja izay faran'izay tsara ambina no sazin'i Salah Eddin.
Mbola tafiditra amin'ireo disadisa hafa miteraka resabe anenjehana ireo mpikatroka mafana fo, ny mpanao gazety sy ny vondronà mpankafy baolina kitra ary ireo tranga maro mifandraika betsaka amin'ny Firahalahian'ny Silamo ihany koa izy.
Heverina ho ezaka famonoan'olona voalohany nahomby natao taminà olom-panjakana fanta-daza tato anatn'ny am-polontaona mahery ny fahafatesan'i Barakat. Mahazo laka any Le Caire amin'izao fotoana izao ny tahotra sy ny tebiteby noho ny fahasahian'ireo mpiady, etsy andanin'izany, atahoran'ireo mpikatroka mafàna fo ny hametrahan'ny fanjakana fepetra ho an'ny tany misahotaka sy fameperana misimisy kokoa ny fahalalahana noho ilay fanafihana.
Ho fanampin'ny fanavaozam-baovao sy ny tatitra, jereo ny fandrakofanay ao amin'ny Global Voices Checkdesk.